Madaxwayne Ku Xigeenka iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka Galmudug oo ka hor yimid Go’aankii uu Xaaf kula saftay Isbahaysiga Sucuudiga+Daawo. – Hornafrik Media Network
Madaxwayne Ku Xigeenka Galmudug iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka Galmudug ayaa Shir Jaraa’id oo ay qabteen waxay ku sheegeen inay ku taageersan yihiin Dowladda Somalia Go’aanka dhex dhexaadnimadda ah ee ay ka qaadatay Muranka iyo Khilaafka Wadamadda Khaliijka.
Shirkaas Jaraaid ayaa intii uu socday waxaa loo qaybiyay Wariyayaasha Bayaan lagu asteeyay inuu ka soo baxay Madaxtooyadda Galmudug oo looga horimaanayo Go’aankii Madaxwaynaha Galmudug, Axmad Ducaale Geelle Xaaf,
Halkan ka akhriso Warsaxaafadeedka.
Halkan ka daawo Shirka Jaraaid ee Madaxwayne Ku Xigeenka iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka
Warsaxaafadeed dhowaan ka soo baxay Madaxtooyadda Galmudug ayaa looga dalbaday Dowladda Dhexe ee Somalia inay dib u eegis ku samayso Go’aankeedii Dhex dhexaadnimadda ahaa ee ay ka qaadatay Khilaafka Khaliijka, Waxaana lagu sheegay Warsaxaafadeedkaasi in Galmudug ay la safan tahay Isbahaysiga Sucuudiga, iyadoona horay ay tallaabadan oo kale u qaadeen Maamuladda Koonfur Galbeed, Puntland, Hirshabelle.
Dowladda Somalia waxay ku adkaysanayaa wali doorkeedii dhex dhexaadnimadda ahaa ee Khilaafka Khaliijka.
Golaha Wasiirada oo soo saaray go’aano lagu adkeynayo Mowqifkii laga qaatay Khilaafka Khaliijka (Akhriso)